China MSZH otomatiki katoni muchina Kugadzira uye Fekitori | Yuanhengtong
Makuriro ekushandisa Iyo inonyanyo shandiswa mune otomatiki bhokisi kuvhura, bhokisi kupinda uye otomatiki ezvigadzirwa Mamiriro ezvinhu anosanganisira: kubhodhi bhokisi remuviri, hose chigadzirwa bhokisi, bhegi chigadzirwa bhokisi, aluminium plastiki Plate mushonga mubhokisi, mapoka akati wandei ezvigadzirwa mubhokisi, nezvimwe. Iyo midziyo inokurumidza, yakarurama uye inogona kusvika kuStable oparesheni kusvika ku40 ~ 120 / min, inogona kutsiva 2-5 manyore. Tsananguro Midziyo iyi mhando nyowani yemidziyo yakagadziriswa pachishandiswa nzwisisika yekumba neyekunze kumberi ...
Inoshandiswa zvakanyanya mu otomatiki bhokisi kuvhura, bhokisi kupinda uye kushandisa michina yezvigadzirwa
Mamiriro ezvinhu anosanganisira: kuvhara mabhokisi emuviri, hose chigadzirwa bhokisi, bhegi chigadzirwa bhokisi, aluminium plastiki
Plate mushonga mubhokisi, mapoka akati wandei ezvigadzirwa mubhokisi, nezvimwewo michina inokurumidza, yakarurama uye inogona kusvika
Muchitevere oparesheni kusvika 40 ~ 120 / Maminitsi, anogona kutsiva 2-5 Chinyorwa.
Midziyo iyi mhando nyowani yemidziyo yakagadzirwa pachishandiswa nzwisisika yepamusha neyekunze tekinoroji yepamusoro. Icho chigadzirwa chepamusoro-soro chekuunganidza gasi, oparesheni, yemagetsi uye yemagetsi kusangana, iyo inovandudza zvakanyanya mashandiro uye kushanda kwekushanda kwemidziyo, inoziva nekukurumidza kurongedza, uye inomhanya zvakanaka uye yakavimbika mukukurumidza kushanda.
Muchina uyu wakakodzera bhodhoro (rakatenderera bhodhoro, mativi bhodhoro) kana girazi bhodhoro kuti upinde mubhokisi otomatiki. Pabhodhoro repamhepo kurongedza uye kurodha, imwechete folda (1-4 peta) uye kurodha, kuona kamwe, katoni kusunungura uye kuumba, chigadzirwa uye kamwe chete kusundira mukati mekatoni, purinda iyo batch nhamba, uye chisimbise bhokisi racho nekukomberedza kana kupisa kunyausa chinamatira mudziyo. Otomatiki kurambwa kwekushayikwa kwezvinhu kana mashitsi rimwe chete kana zvigadzirwa zvakapedzwa uye zvigadzirwa zvakapera.
Inogona kupedzisa akateedzana enzira dzakaomarara, kusanganisira bhodhoro remishonga kana kuendesa zvinodhaka, kupeta manyore (1-4 nguva kupeta) uye kuendesa, kuvhura kwekatoni, kuumba uye kuendesa, mabhodhoro uye yekupeta mirairo, batch nhamba yekutsika uye maviri mapepa mitauro kupeta katoni . Muchina uyu wakagadzirwa zvine mutsindo zvinoenderana nezvinodiwa neGMP. Deko rayo rakagadzirwa nesimbi yemhando yepamusoro. Iyo yekuvhiya chikuva yakavharwa ne plexiglass madhoo nemahwindo. Chikamu chekutapurirana chine basa rekudzivirira zvakanyanya uye kumira kwechimbichimbi. Mune iyo system yekudzora, yemunhu-muchina interface inoshandiswa kuchengetedza kuchengetedzeka kwevanoshanda.
1.Muchina une compact uye inonzwisisika dhizaini, yakagadzikana uye yepamberi kuita uye nyore mashandiro.
2. Mugamuchiri anotora frequency kutendeuka yekumhanyisa mutemo (Yekumhanyisa kumhanya inogona kumisirwa zvidimbu 30-120 paminiti zvinoenderana nekurongedza zvinhu uye kuoma kurongedza.)
3. PLC inoshandiswa otomatiki kuzvidzora.
4. Shandisa epasi rose inozivikanwa nemagetsi uye mweya mweya zvikamu.
5. HMI inogona kuratidza kuputira kumhanya uye otomatiki kuverenga.
6. Iyo yepamusoro-yakasimba fotoelectric mudziyo unoona kushanda kwechimwe nechimwe chinhu. Chero chipi zvacho chakasarudzika panguva yekushanda chinogona kuratidzwa otomatiki kuitira kujekesa iko kukanganisa munguva.
7. Muchina uyu unogona kushandiswa nemaoko kana otomatiki.
8. Iyo yakagadzirirwa otomatiki yekuona system kune alarm uye kubvisa zvakaremara zvigadzirwa, uye kudzima muchina mushure meimwe kuvhiyiwa.
9. Misa muchina kana waremerwa.
Kukwanisa 40-120 A / miniti
Kushanda Kushanda 0.4-0.6mpa
Zvinodikanwa ZveMagetsi 220V - 50 / 60Hz
Saizi yeMuchina 2220 （L 700 * 700 （W 16 * 1600 （H）
Gross Kurema 260KG
Zvadaro: Yakazara otomatiki Multifunctional Packaging Machine